Nihaona tamin'i Mozambika ny birao fizahantany afrikanina hanampiana aorian'ny rivodoza indroa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nihaona tamin'i Mozambika ny birao fizahantany afrikanina hanampiana aorian'ny rivodoza indroa
Ny filoha lefitry ny birao fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube sy ny tale jeneraliny Doris Woerfel dia nihaona tamin'i Marta Lucas miadidy ny PR, ny marketing ary ny fifandraisana ho an'ny Birao fizahan-tany Mozambika. Ny fivoriana dia natao tamin'ny seho fitsangatsanganana Indaba mitohy any Durban, Afrika Atsimo.
Vao haingana i Mozambika no niharan'ny fatiantoka lehibe taorian'ny nandalovan'ny siklon-droa. Marta Lucas dia nilaza fa: "Ny Birao Afrikana fizahan-tany dia hita fa feo any amin'ny faritra, ary faly izahay manatevin-daharana ity hetsika lehibe ity."
Ny Biraon'ny fizahantany afrikanina dia miara-miasa amin'i Mozambika amin'ny safidy hanampiana ny firenena mandritra izao fotoan-tsarotra izao sy ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ataon'izy ireo.
Ny Zimbaboe fizahan-tany dia manasa ireo mpitarika ny Birao fizahan-tany Afrikanina hanao asa fitoriana
Fizahan-tany sy fitsikilovana ho an'ny governemanta amerikana: mpanafika iray manazava